Maxaa ka soo kordhay Shirka Musharaxiinta Mucaaradka uga socda Muqdisho? | Dhacdo
Home Wararka Maanta Maxaa ka soo kordhay Shirka Musharaxiinta Mucaaradka uga socda Muqdisho?
Maxaa ka soo kordhay Shirka Musharaxiinta Mucaaradka uga socda Muqdisho?
Siyaasiyiinta Musharaxiinta Mucaaradka ayuu weli shir uga socdaa Magaalada Muqdisho, iyadoona shirka lagu daray maalin kaloo dheeri ah.
Shirka oo Sabtidii ka furmay Magaalada Muqdisho ayuu marka hore ujeedku ahaa in la soo geba-gabeeyo Isniintii, waxaana lagu daray maanta oo Talaado ahayd, iyadoona loo baahday maalin kaloo dheeri ah. Arbacada ayaana la fillayaa in shirka la soo geba-gabeeyo.
Musharaxiinta Mucaaradka ayaa waxay maanta aaladda foggaan-aragga, ay kulan kula qaateen Wakiilada Beesha Caalamka ee Somaliya, iyagoona kala hadlay walaacooda ku aadan arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Wararka ayaa sheegaya in musharaxiinta mucaaradka ay Beesha Caalamka la wadaageen warqad furan, oo ay kaga hadlayaan cabashooyinka ay qabaan.
Shirka oo ka socda Hotel Jazeera ayaa waxaa maanta ku biiray Culimada Ahlu Sunna Waljameeca. Ahlu Sunna ayaa ku baaqday in wadahadal lagu xaliyo muranka hareeyay doorashooyinka dalka.
Dhanka kale Gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya, Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa caawa ku biiray shirka musharaxiinta. Jawaari hadda waa Mudane ka tirsan Golaha Shacabka.
Shirkan ayaa ah mid cadaadis siyaasadeed lagu saarayo Villa Somalia, si wax kaga bedesho Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka qaarkood, oo ay ka biyo diidan yihiin Musharaxiinta Mucaaradka, sababo ku aadan, iyagoo u arka inay ka tirsan yihiin Saraakiisha Hay’adda Nabad Suggida iyo Shaqaalaha Rayidka ee Xafiisyada Madaxda.
Previous articleR/Wasaare Rooble oo kormeeray Dugsiga tababarka Ciidanka qaybta 60aad
Next articleMaxaa ka soo kordhay dagaalka ka socda Waqooyiga Itoobiya?